UNGAYENZA NJANI IVIDIYO YOBUME BEYOUTUBE - ITHAMBILE
Kweli hlabathi lobuchwephesha, sihlala sibambene nezixhobo nakwizikrini zazo. Ukusetyenziswa kakhulu kwezixhobo zexesha elandisiweyo kunokuba nefuthe elibi kwimpilo yethu, kwaye kunokuwenza buthathaka umbono wethu xa sijonga rhoqo kwizikrini zedijithali kwindawo ephantsi yokukhanya. Ukuba ungathandabuzeki ucinga ukuba yeyiphi eyona nto iphambili ukujonga izikrini zenkqubo yakho kuseto lokukhanya okuphantsi? Ke mandikuxelele ukuba zonke zijongana nokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okuphuma kwizikrini zekhompyuter. Ngelixa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kuxhasa ukujonga isikrini sakho sedijithali phantsi kwezibane eziqaqambileyo zelanga, xa abasebenzisi bekhompyuter bebukele izikrini zedijithali ezikhuthaza izibane eziluhlaza ubusuku bonke okanye kuseto olukhanyayo oluphantsi, kunokubangela ukudinwa kwengqondo yomntu kuba kukhokelela ekudidekeni iiseli zakho zobuchopho, uxinzelelo lwamehlo kwaye uthintela imijikelo yokulala enokubangela ingozi kwimpilo yakho.
Ke, i-YouTube izisa umxholo omnyama othi, emva kokuvumela, unokunciphisa isiphumo sokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kwindawo emnyama kunye nokunciphisa uxinzelelo emehlweni akho. Kule nqaku, uya kufunda malunga nendlela yokwenza imowudi emnyama kwi-YouTube yakho.
ayikwazi ukulungelelanisa ukukhanya kweewindows 10
Indlela yoku-1: Vumela indlela emnyama yeYouTube kwiWebhu
Indlela yesi-2: Yenza ngokwakho iVenkile yeNdlela ye-YouTube
1. Vula ibrawuza yakho oyithandayo.
2.Chwetheza ibha yedilesi: www.youtube.com
3. Kwiwebhusayithi yeYouTube, cofa u icon yeprofayile kwikona ephezulu ngasekunene. Iya kuvela kunye noluhlu olutsha lokukhetha kwiakhawunti yakho.
4. Khetha i Umxholo omnyama ukhetho kwimenyu.
5. Cofa apha Qhobosha iqhosha TO ON Yenza umxholo omnyama.
Uya kubona ukuba iYouTube iyatshintsha kumxholo omnyama, kwaye iya kujongeka ngoluhlobo:
Kukho into engalunganga ngomncedisi onegunya lokusebenzela omnye okanye idilesi ayichanekanga
Indlela yesi-2: M qho ngonyaka Sebenzisa imowudi emnyama yeYouTube
Ukuba awukwazi ukufumana indlela emnyama yeYouTube ungakhathazeki ngokusebenzisa le ndlela, ungenza ngokulula umxholo omnyama we-YouTuber ulandele la manyathelo:
ixesha lokubaleka usebenzisa i-cpu kakhulu
1. Vula Youtube kwisikhangeli seChannel.
2. Vula imenyu yonjiniyela ngokucinezela Ctrl + Shift + mna okanye F12 .
3. Ukusuka kwimenyu yonjiniyela, tshintshela kwi Ikhonsoli tab kwaye uchwetheze le khowudi ilandelayo kwaye ucofe u-Enter:
4. Ngoku Guqula imowudi yobumnyama iye kwi-ON kuseto . Ngale ndlela, ungenza ngokulula imowudi emnyama kwisikhangeli sakho kwiwebhusayithi yeYouTube.
1. Kudidi lwebar yedilesi www.youtube.com kwaye ungene kwiakhawunti yakho yeYouTube.
2. Cofa kwi imigca emithathu (Izixhobo) emva koko ukhethe Umphuhlisi weWebhu ukhetho.
3. Ngoku khetha Ikhonsoli yeWebhu & Chwetheze le khowudi ilandelayo:
uxwebhu.cookie = Undwendwelo_INFO1_LIVE = fPQ4jCL6EiE
windows 10 umshicileli ekwimpazamo
4. Ngoku, yiya kwiprofayile yakho kwiYouTube & cofa kwiNdlela emnyama ukhetho.
5. Guqula iqhosha ulayite ukuze uvule iNdlela emnyama yeYouTube.
Isikhangeli seMicrosoft Edge:
1. Yiya ku www.youtube.com & ungene kwiakhawunti yakho yeYouTube kwisikhangeli sakho.
2. Ngoku, vula Izixhobo zomphuhlisi kwi-Edge browser ngokucinezela Fn + F12 okanye F12 indlela emfutshane
3. Tshintshela kwi Ikhonsoli tab kwaye uchwetheze le khowudi ilandelayo:
khubaza ukwenza kusebenze iiwindows ezili-10
4. Hit Enter kwaye uvuselele iphepha ukwenza ' Indlela emnyama 'YeYouTube.
Khipha i-Intanethi Explorer kwi Windows 10
5 Indlela yokukhupha imifanekiso kwiFayile yePaul
Utshintsha njani igama lomsebenzisi leakhawunti Windows 10
Uyenza njani i-Screensaver ngaphakathi Windows 10
Ndiyathemba ukuba la manyathelo angentla ayeluncedo, kwaye ngoku unako ngokulula sebenzisa imowudi emnyama yeYouTube kwiChannel, Firefox, okanye kwi-Edge browser , kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sikhokelo, nceda uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lezimvo.
iisetingi zememori yokwenyani yeewindows 10
iiwindows azinakufakwa kule diski. idiski ekhethiweyo ineetafile zokwahlulahlula i-gpt
Ukophula umthetho we-dpc wewindows 10 2019
msgstr "" "Uqhagamshelo lwenethiwekhi ngaphandle kwamacingo" ayinalo uqwalaselo olusebenzayo lwe-ip
Iwindows 10 dns ayisebenzi